Alan Rickman. Mavara ake anonyanya kuyeukwa | Zvazvino Zvinyorwa
Alan Rickman. Ake akanyanya kurangarirwa mavara mavara. Uye madhiri avo
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vechidiki Mabhuku, Novela, Romance novel, Theater
Mufananidzo wepashure: Alan Rickman. Cambrig kubva kuna Jones Getty Mifananidzo.
Alan Rickman, Mutambi weChirungu uye director, akashaya pazuva rakaita nhasi muna 2016. Akatorwa nechirwere chepancreatic cancer pazera remakore makumi matanhatu nemapfumbamwe. Nhaka yake yaive basa mumitambo uye cinema izere nekubudirira uye kuzivikanwa. Pakati pe mavara avo vakadudzira, paiva nevakawanda zvinyorwa. Mukurangarira kwake, iyi iri kudzokorora vamwe vacho.
2.3 Viscount yeValmont
3.1 Colonel Brandon
4 Madhiri ako
Akazvarirwa mukati London, iro guta rakamudzingawo, aive mutambi, theatre uye director director uye graphic dhizaini. Mwanakomana wababa veIrish uye amai veWales uye wechipiri wevana vana vehama.
Semutambi akanaka weBritish, Rickman aive akadzidziswa zvakanyanya, izvo zviri pachena zvinosanganisira Shakespeare. Akagamuchira mubhadharo wakamutendera kuti adzidze ku Royal Academy yeDrama Art, London, izvo zvakamuendesa iye kutanga yake nyanzvi yekuita basa.
Aive mumwe wevakakurumbira Royal Shakespeare Kambani. Saka pakati pemabasa ake paive neyaJacques de Sezvaunoda, Achilles, we Troilus naCressida, kana Fernando de Dutu, pakati pevamwe vazhinji. Mamwe mabasa ndeaya:
Unoperekedzwa nechinhu chidiki pane David suchet sa chiremba watson, Holmes yakanga iri yake kutanga kurova pamapuranga, mukati 1976, izvo zvakamuwanisawo mukurumbira wekutanga wakakosha.
Yake yekutanga se Tybalt, ivo Romeo naJuliet, Mukugadzirwa kwe terevhizheni kubva kuBBC, hongu futi. Akabatana nemumwe mukuru saAnthony Andrews. Yaive iri 1978.
En 1987 yaive Viscount deValmont, ye Ushamwari hune ngozi, naPierre Chordelos de Laclos, mune yemitambo montage ye West End akabudirira kwazvo uye akamupa kusarudzwa Tony mubairo mitambo. Iyo ndiyo yakabata kutarisisa kwemakambani ekugadzira eHollywood ayo akaigadzirisa nguva pfupi yapfuura mushanduro dzinoyeukwa kwazvo dzeiyo bhaisikopo maakatambidzwa naJohn Malkovich kana Colin Firth.
Vashoma vatambi vane rudo saColonel Brandon anobva Kunzwisisa uye Kunzwisisa, imwe yemanoveli makuru e Jane Austen. Uye kunetsekana kukuru kwaRickman, kwakabatana zvakanyanya nevashoma vanoonga uye zvakaipa zvebasa, kunyanya kubvira muna 1988 akanyora mumwe wevakanyanya kunaka mumafirimu nguva dzese neicho chisingakanganwiki Hans gruber, ivo Sango rekristaro. Kana muna 1991 ndaive ndanyengera Sheriff weNottingham en Robin Hood, muchinda wembavha.
Asi zvakare vatambi vakuru ndivo vanofamba zvakanaka pakati pevanhu vakaipa nemagamba uye Rickman aive muenzaniso weiye ane rudo, ane hanya uye anozvipira iye Victorian murume anomiririrwa naBrandon. Akazviita mune yakabudirira kwazvo vhezheni ye Ang Lee ye cinema mu 1995.
Unofanira kuzvibvuma. Zvizvarwa zvidiki zvinogara zvichirangarira Rickman semunhu anopesana uye anodikanwa pamwe nekuvengwa mudzidzisi we Harry Potter mune cinematic saga yemukomana wizard yakagadzirwa na JK Rowling. Pamwe hunhu hwake husinganzwisisike uye mune izvo nuances iyo yaanogona kupa nezwi rake, kuratidza uye kuvapo kune chero dudziro dzake zvinokosheswa zvakanyanya
Uye pakupedzisira, pane uyu anotsigira hunhu mu Mafuta muna 2006, mukugadzirisa kwenyaya yakakurumbira na Patrick Suskind, uye nenyeredzi saDustin Hoffman.
Yaizivikanwa nguva yadarika muchinyorwa che The Guardian. Alan Rickman anga achinyora mapepanhau kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu. Mavari akabata mhando dzese dzenyayaKubva pane kwake kufunga nezvekutengesa kwake kune ake ezvematongerwo enyika maonero kana ake ega zviitiko, achipfuura, zveshuwa, mazhinji maanecdotes kubva kupfura kwake, hongu futi ayo aHarry Potter.
Pakazara vanowedzera 27 akanyorwa nemaoko Rickman uyo akatanga mukutanga kwema90s aine chinangwa chekuvaburitsa. Saka ikozvino ivo vanozogadzirirwa kuita bhuku chete uye vakarongerwa kuona mwenje mukati kuwa 2022. Kana zvirizvo, iwe ungabatana ne nhaka huru izvo zvakasiya akawanda uye akanaka maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Alan Rickman. Ake akanyanya kurangarirwa mavara mavara. Uye madhiri avo
Iye ane mukurumbira Alan Rickman akasiya ino nyika kare kwazvo uye yake iconic yekuita basa ndiyo yake inoshamisa nhaka